I-Big Oven Kitchenette Unit-Raleigh Rooms - I-Airbnb
I-Big Oven Kitchenette Unit-Raleigh Rooms
I-Big Oven Suite iza kukunika indawo enamagumbi okulala ayi-2 efumaneka ngaselunxwemeni kwintsapho yokuloba yaseRaleigh. Tyelela le ndawo ukuze ubone ii-icebergs, iminenga nezinye izilwanyana zasendle, uze ubuke iindawo zokuhlala ze-Viking. Yonwabela ikofu yakho kwiveranda yethu egqunyiweyo ejongene neBurnt Cape Ecological Reserve. Zive usekhaya kunye nazo zonke izinto ezifunekayo kule ndawo enamagumbi okulala amabini (Akukho mali itsalwayo kubantwana abayi-4 nangaphantsi, ungakhetha ukuba ungabikho abantwana xa ubhukisha)
Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kwi-propane BBQ yoluntu ebekwe kwiveranda engaphambili kunye nebhoyila yedangatye ukuba ufuna ukubilisa imbaza zakho okanye iilobster zasekhaya.
IRaleigh luluntu oluzolileyo olubekwe ecaleni kwePistolet Bay entle. Jonga iRaleigh Historical Fishing Village ekumgama wokuhamba ujikeleze izibuko. (Qaphela: Njengoko kubonisiwe kwi-2020 Newfoundland kunye neLabrador Travelers Guide)
Ngaphaya kwezibuko elisuka kumagumbi eRaleigh ungajonga iNdawo yoLondolozo lweNdalo etshisiweyo eyaziwa ngokuba yi-limestone barrens, izityalo ezinqabileyo ze-arctic, iipoligoni zeqabaka, imingxunya yeenkanunu kunye nemingxuma yolwandle. Thatha uhambo lokuhamba ngeenyawo kwiNuddick Trail ekumgama omfutshane kwi-Ship Cove Road.
I-L'Anse aux Meadows yeSizwe yeNdawo yeMbali imalunga nemizuzu engama-30 yokuqhuba kunye noluntu oluhlelelekileyo ecaleni kweViking Trail, kunye nethuba lokujonga iintaba zomkhenkce kunye neminenga eyanga amanxweme asemantla.
Umnini/abaqhubi bahlala kwaye basebenze eRaleigh kwaye banokufikelelwa ngokulula ukuba ufuna uncedo lwabo. IRaleigh Rooms nayo inevenkile yezandla, iTaylor's Crafts ibekwe ezantsi kwendlela enabasebenzi abanokukunceda ngokuhlala kwakho.